खुल्ला ठाउँमा शौच गर्नेलाई १५ किलोको माला ! - SangaloKhabar
खुल्ला ठाउँमा शौच गर्नेलाई १५ किलोको माला !
सप्तरी, २४ पुस। राम्रो काम गर्नेलाई माला लगाएर तथा अबीर दलेर सम्मान गर्ने गरिन्छ । राजविराजमा भने यसको ठीक उल्टो अभियान प्रारम्भ गरिएको छ । नगरको सार्वजनिक ठाउँमा शौच गर्नेलाई फूलमाला र अबीरले स्वागत गर्ने अभियान प्रारम्भ गरिएको छ ।
यसबाहेक एक वटा चकलेट समेत दिने गरिएको छ । खुल्ला ठाउँमा शौच गरेको देखे लगत्तै युवाहरुले फूलको माला लगाएर लाज लगाउन र सार्वजनिक ठाउँमा पिसाव नफेर्न आग्रह गर्दै यो अभियान प्रारम्भ गरिएको हो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष २४, २०७४ समय: १३:३२:२९